Amaphephandaba kufuneka acinge ... | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 5, 2006 NgoLwesibini, Septemba 5, 2006 Douglas Karr
Ukusuka kuSeth blog namhlanje ngokubhekisele kwi inqaku kuMhleli kunye noMshicileli malunga neembono zikaGodin ezivela Incinci yiNkulu enkulu kwaye zisebenza njani kushishino lweendaba.
Uninzi lweenkampani ezijonge ukuqhubela phambili ziya kwenza uhlalutyo lwe-SWOT ngokuthelekisa ukhuphiswano lwabo. Ingxaki kukuba imithombo yeendaba 'yasekhaya' yenze umsebenzi omkhulu wokungahoyi i-Intanethi njengesisongelo ixesha elide. Kuze kube kanti amaphepha-ndaba anikezela ngeniso eQokelelweyo kuLuhlu lukaCraig kunye ne-eBay apho bafumanisa ukuba le nto ye-Interweb ilapha ukuba ihlale. Kodwa abaza kuguqula izihlunu zommandla kwaye basebenzise ithuba apho bakhoyo.
I-SWOT = (S) trengths, (W) i-eaknesses, (O) amathuba, (T) izoyikiso
Zintathu izinto eziphambili ephephandabeni ngaphezulu kukhuphiswano lwayo lwe-Intanethi: ingxelo yendawo, ukuhanjiswa kwengingqi kunye nezixhobo zasekuhlaleni. Ngaba ubona into efanayo apho? Indawo, indawo, indawo !!! Ezi zinto zintathu ekufuneka ziguqulwe zaba zizibonelelo zokhuphiswano ngobusuku obunye! Ndichithe ixesha elingaphezulu kweshumi kwishishini lamaphepha-ndaba ndikhwaza ndiphuma phezulu emiphungeni yam ukuba kufuneka sisebenzise amandla ethu ukuze siwasebenzise amathuba okuba ngabengingqi. Kwakusezindlebeni ezingevayo.
Umcimbi ophambili kukuba ishishini lamaphephandaba lishishini lesini. Iinkokeli zayo zifundisiwe ngaphakathi kolu shishino kwaye kunqabile ukuba zilishiye eli shishini libe neetalente. Umzi mveliso we-Intanethi, kwelinye icala, uqokelele italente kumashishini amaninzi- kubandakanya amaphephandaba (moi).
Andiqinisekanga ukuba eyona nto iphambili kukuba amaphephandaba kufuneka acinge kancinci, ndiyakholelwa ngokwenene ukuba kufuneka bathathe ithuba lokwahluka abanako njengeshishini lommandla. Kananjalo, ndicinga ukuba lixesha eliphezulu lokuba baqale ukujonga ngaphandle kweendonga zabo ezine ukutsala italente. Abantu ebekade bekho ubomi bonke ababenzi kakuhle.
Meyi 1, 2009 kwi-4: 31 PM
Inqaku elilunge ngokwenene-utshintsho luhlala lucelwa umngeni!